बझाङमा जनशक्ति नहुँदा सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा समस्या – Nepal Press
बझाङमा जनशक्ति नहुँदा सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा समस्या
२०७८ वैशाख १० गते १६:५७
बझाङ । भारतबाट घर फर्केका बझाङकोे जयपृथ्वी नगरपालिका-६ का ४८ वर्षीय पुरुषको बिहीबार कोरोना सङ्क्रमणले मृत्यु भयो । उनी भारतको तामिललाडुबाट चैत २९ गते बझाङ आएका थिए । उनले जिल्ला अस्पताल सिमखेतको प्रयोगशालामा वैशाख १ गते कोभिड एन्टिजेन विधिबाट चेक गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो ।
सङ्क्रमितको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि कोहोलपुर लैैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भयो । कोभिड-१९ लाई लक्षित गर्दै जिल्ला अस्पताल बझाङमा सञ्चालनमा ल्याइएका सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर सेवा जनशक्ति अभावका कारण बन्द भएका छन् । त्यसले गर्दा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला अस्पताल बझाङका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति नारायण जोशीले बताए । जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि जनशक्ति नहँुदा सञ्चालन ल्याउन नसकिएको र उपचारमा समस्या हुने गरेको जोशीले बताए ।
नयाँ वर्षका लागि घर आउनुभएका थलारा गाउँपालिकाका ४ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सबैमा कोरोना सङ्क्रमण देखियो । आइतबार जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आएका दुर्गाथली गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकाका २ जनामा लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा दुवैमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । जिल्ला अस्पतालमै कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मीमा पनि लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भयो । ती स्वास्थ्यकर्मीमा यसअघि पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । कोभिडविरुद्धको पहिलो मात्रा भ्याक्सिन लगाएकी उनलाई पहिलाभन्दा कडा खालका लक्षण देखिएको छ । सबै जना अहिले जिल्ला अस्पतालमा छन् ।
बझाङका १२ वटै स्थानीय तहको पहलमा स्थापना गरिएको पीसीआर प्रयोगशाला र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएका सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर सेवा जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकेर त्यसै थन्किएका छन् । सेवा सञ्चालनका लागि ४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने र सबैको सेवासुविधा अस्पताल विकास समितिले व्यहोर्न सम्भव नभएपछि सेवा बन्द गरिएको जिल्ला अस्पताल बझाङका प्रमुख डा. सन्दीप ओखेडाले बताए । डा. ओखेडाले भने, ‘अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्ति र सीपकै भरमा भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सम्भव भएन । सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर चलाउने जनशक्ति अस्पतालमा छैन । शुरुमा अस्पतालले सेवासुविधा व्यहोर्ने गरी कर्मचारी माग गरेका हौँ । कोही पनि आएनन् । दुर्गम भनेपछि कसैले आउन मान्दैनन् । प्रदेश सरकाले अस्पतालमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भनेर माग गरेको छ । आवश्यक जनशक्ति मागका लागि पत्र पठाउने तयारीमा छौँ ।’ प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके चाँडै सञ्चालनमा आउँछ । जनशक्ति नहुँदा जडान गरिएका उपकरण पनि प्रयोग गर्न नपाएको उनको दुखेसो छ ।
प्रदेशका ६ पहाडी जिल्ला अस्पतालमा जडान गरिएका सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर उपकरण प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ५ महिनाअघि प्रदेश सरकारको सहयोगमा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरणसहित सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर जडान गरिएको थियो । सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि अस्पताल भरिन थालेका छन् । सङ्क्रमणदर यही गतिमा बढे केही दिनमा उपचारका लागि सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको अभाव हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । सङ्क्रमितको उपचारका लागि रेफरल अस्पताल तोकिएको सेतीको कोरोना अस्पतालमा अहिले २१ जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख १० गते १६:५७